Accueil > Gazetin'ny nosy > Fiainana ara-tsôsialy : Mikoroso fahana tanteraka
Fiainana ara-tsôsialy : Mikoroso fahana tanteraka
Teny ataon’ny filoha matetika, na tamin’ny fampielezan-kevitra na izy efa mitondra ny firenena ny hoe : « tonga ny fotoana hiposahan’ny masoandro ho an’ny vahoaka Malagasy ». Mazava ho azy fa ny tena tian’ny filoha ambara amin’izany dia ny hoe tapitra hatreto ny fahantrana lalina fa handroso amin’izay ny firenena sy fiainan’ny Malagasy. Samy mahita daholo anefa ny rehetra fa mifanipaka amin’izany ny zava-misy eto Madagasikara, ary raha ny fiainana ara-tsôsialin’ny mponina no resahina dia hita fa tena mikoroso fahana tanteraka, ankehitriny.
Tsy voatery ho mpandinika fiarahamonina fa na olon-tsotra aza dia mahita sy mahatsikaritra fa miharatsy ny fiainana ara-tsôsialy eto amintsika, na amin’ny tanàn-dehibe na any ambanivohitra. Anisany voalohany amin’izany ny resaka tsy fandriampahalemana izay tena efa alohalika ranom-bary. Mirongatra izay tsy izy ny asan-jiolahy amin’ny endriny rehetra, lasa mahazo vahana amin’ny Faritra vitsivitsy ny fakana an-keriny olombelona, ny halatra taolam-paty, ary amin’izao fotoana dia lasa lasibatra hatramin’ny zaza varira izay tsy mbola fahita teto amin’ny firenena taloha. Na ny fisolokiana aza dia lasa mahazo laka ihany koa eto amin’ny firenena ary miseho amin’ny endriny samihana eny anivon’ny fiarahominina eny.
Hita miharihary fa miha-mahantra ny Malagasy ary izany no tena antony mahatonga ny tsy fandriampahalemana hirongatra eran’ny Nosy. Raha ny eto Andrenivohitra no jerena, saika mitombo isan’andro ny mpatory an-dalana sy ny mpangataka. Torak’izany koa ny vehivavy dia lasa maro no mirotsaka amin’ny fivarotan-tena, eny anivon’ny fiarahamonina sy any anaty tambazotran-tserasera sôsialy. Zavatra iray ahitàna taratra ny fikorosofahan’ny fiainana ara-tsôsialin’ny Malagasy koa ny gaboraraka izay miha mahazo vahana hatrany eto amintsika, ary saika ny sehatra rehetra mihintsy no ahitàna izany. Lasa vahoaka tsy fatra-panjana fitsipika (indiciplinés) ny Malagasy, tsy mipetraka intsony ny fifanajana eny anivon’ny fiarahamonina fa samy manao izay danin’ny kibony ny rehetra. Tsy resahina intsony ny fahavoretran’ny tanàna, ny tanora lasa mivarolava amin’ny taoka sy ny zava-mahadomelina. Na inona na inona fanazavana dia tompon’andraikitra voalohany amin’izany ny Fanjakana izay tsiahivina ihany fa ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka no adidiny voalohany indrindra.